२०१९ मा को को बिहे गर्दै छन त ? « LiveMandu
२०१९ मा को को बिहे गर्दै छन त ?
१६ पुष २०७५, सोमबार २१:२२
बलिउडका अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरुको विवाह सम्बन्ध पनि निकै रोचकताको पुर्वक हेरिने गर्दछ । सन २०१८ मा अभिनेता तथा अभिनेत्री रणविर सिंह र दिपिका पादुकोण तथा प्रियंका चोपडा र निक जोनले घरजम गरेका छन । भारतका चर्चित हाँस्य कलाकार कपिल शर्मा पनि बैबाहिक जिवनमा बाँधिइसकेका छन भने यसपाली बलिउडका कुनकुन नयाँ जोडी यस वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिदै छन त ?
रणबीर कपुर- आलिया भट्ट
अहिले रणबीर कपुर र आलिया भट्टको प्रेम सम्बन्धले बलिउड न्युज तताएको छ । यिनीहरु बलिउडका स्पेसल जोडीका रुपमा रहेका छन् । रणबीर र आलीयाको सम्बन्धको चर्चा हरेक दिन देख्न पाइन्छ । दुबैले एक अर्कालाई डेट गरेको स्वीकारेका छन् । दीपिका पादुकोण , क्याट्रीना क्याफ पछि रणबीर अब आलियासँगको प्रेम सम्बन्धमा छन् । यसपाली भने उनी आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहको नाम दिन तयार भएका छन् । दुबैका परिवारले यो सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको कुरा मिडियाहरुले जानकारी दिएका छन ।
अर्का बलिउड स्टार वरुण धवन र नताशा दलालको प्रेम सम्बन्ध पनि पहिले देखि नै मिडियामा आइरहेको छ । पछिल्ला समयमा उनीहरु संगसँगै छुट्टी मनाउन विदेश जाने पनि गरेका छन् । यस्तै उनी कहिले डिनर त कहिले कफी डेटमा देखिन्थे । वरुणले आफु नताशासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको स्वीकार गरेका छन् । सञ्चार माध्यमका अनुसार दुबै जना २०१९ मा विवाह गर्ने तयारीमा छन् । दुबैका परिवारले पनि उनको सम्बन्धलाई स्वीकारेका छन् ।
अर्जुन कपुर – मलाइका अरोरा
३३ वर्षिय बलिउड स्टार अर्जुन कपुर हाल आँफु भन्दा १० वर्ष जेठी मलाइका अरोरासँगको प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन् । आजभोलि उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध सामाजिक सञ्जाल भरी भाइरल बनेको छ । प्राय जसो हरेक कार्यक्रममा दुवै सँगसँगै देखिने गर्दछन । अरबाज खानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी मलाइका एक्लै बनेकी थिइन भने अब उनी अर्जुनसँग विवाह गर्ने पक्षमा पुगेकी छिन् । अर्जुन पनि मलाइकासँग विवाह गर्न तयार भएका छन् ।
रिचा चड्डा-अली फजल
बलिउड नायिका रिचा चड्डा प्रेमी अली फजलसँग पछिल्ला केहि दिनदेखि प्रेम सम्बन्धमा छिन् । अहिले यो नयाँ जोडीले धेरै चर्चा पाउन थालेको छ । रिचा पछिल्लो केहि समयदेखि अलीसँग डेट गरिरहेकी छिन् । दुबैले एकैसाथ फुकरे र फुकरे रिटन्स्मा सँगै काम गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा दुबैका तस्बिरहरु संगै देखिन थालिएका छन् । यिनीहरुले आफु प्रेमे सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरी सकेका छन् । यो जोडीको पनि २०१९मा विवाह गर्ने निकै सम्भावना रहेको छ ।
सुष्मिता सेन- रोहमन शोल
नायिका सुष्मिता सेन आजभोली आफ्ना २७ वर्षिय प्रेमी रोहमन शोलसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको खबर यदाकदा चर्चामा आउने गरेको पाइन्छ । यिनीहरुले पहिले आफु प्रेम सम्बन्धमा रहेको स्वीकार गरेका थिएनन् । तर अब दुबै खुलेर सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका छन् । दुबैले सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गरेर आफ्नो सम्बन्ध स्वीकार गरेका छन् । सुष्मिता अब घरजम गर्ने पक्षमा देखिएकी छिन् । सुष्मिता र रोहमनको २०१९ मा विवाह बन्धनमा बाँधिने कुरा बाहिर आएको छ ।